မမေးလည်းဖြေ (၁၆)- မွတ်စလင်မ်မဟုတ်ရင် သတ်ရမှာလား? | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Mandalay Regional Chief Minister U Yeဲ Myint harshly tells Local Muslim Community Leaders at the meeting
မွန်ဒီမိုကရေစီ ပါတီ ဥက္ကဌ “မဟာဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒနှင့်ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု” »
မမေးလည်းဖြေ (၁၆)- မွတ်စလင်မ်မဟုတ်ရင် သတ်ရမှာလား?
မမေးလည်းဖြေ (၁၆)- မွတ်စလင်မ်မဟုတ်ရင် သတ်ရမှာလား? ဧပြီ-၁၆-၂၀၁၃ ရေးသူ-သဲတပွင့်
အစ္စလာမ်သာသနာတော်ကို မလိုမုန်းတီးသူတို့က အစ္စလာမ်သာသနာတော်၏ အဆုံးအမဖြစ်သော ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ပါ သွန်သင်ချက်အချို့ကို မိမိတို့ အလိုရှိရာ အစိတ်အပိုင်းမျှကိုသာ မိမိတို့လိုရာ ဖြတ်တောက်ကောက်နုတ်တင်ပြကြလျက် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်တွင် မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူတို့အား သတ်ရန် လမ်းညွှန်ထားကြောင်း ပြောကြပါသည်။ သူတို့ ညွှန်းဆိုသည့် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်လာ သွန်သင်ချက်များကို ဦးစွာပထမ တင်ပြပါမည်။
“ထို့ပြင်တဝ အသင်တို့သည် ထိုသူ( ကာဖိရ် – မိစ္ဆာ ဒိဋ္ဌိ) တို့အား တွေ့ဆုံ ဖမ်းဆီးမိရာအရပ်၌ တိုက်ခိုက် သုတ်သင် ရှင်းလင်းကြကုန်လော့။”
“သို့ဖြစ်ပေရာ အသင်တို့သည် ထိုမွတ်ရ်ှရစ်က်(တုဖက်ယှဉ်တွဲကိုးကွယ်သူ)တို့အား တွေ့ရာနေရာများတွင် တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ် ကြလေကုန်။ ထို့ပြင် သူတို့အား ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင် အကျဉ်းချ ထားကြလေကုန်။ သူတို့ ပုန်းကွယ်လျက်ရှိသောနေရာများသို့လည်း ချောင်းမြောင်း တိုက်ခိုက်ကြလေကုန်။”
“အသင်တို့သည် သူတို့အား အဘယ်ကြောင့် မတိုက်ခိုက် မသုတ်သင်ကြလေသနည်း။”
“အသင်တို့သည် သူတို့အား တိုက်ခိုက် သုတ်သင် ရှင်းလင်းကြကုန်လော့။”
အထက်ပါ ဖော်ပြချက်များသည် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်တွင် အမှန်မုချ ပါရှိသော သွန်သင်ချက်များ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဆိုလျင် အစ္စလာမ်က ဘာသာမတူသူ မွတ်စလင်မ်တို့အား တွေ့ရာ သင်္ချိင်း ဓားမဆိုင်းဘဲ သတ်ဖြတ်ခိုင်းထားသည့် သာသနာပေလော … စဉ်းစားဖွယ်၊ စိုးကြောက်ဖွယ်ရာပင်။
ဤသွန်သင်ချက်အတိုင်းသာ အမှန်ဆိုပါက အယုတ်အလတ် အမြတ်မရွေး ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ လေးပုံတစ်ပုံမျှသော သန်းနှစ်ထောင်ခန့်လူသားထုက အစ္စလာမ်သာသနာအား လိုက်နာကျင့်သုံး နေကြခြင်းသည် ယုတ္တိရှိပါဦးမည်လော။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ပညာတတ်မွတ်စလင်မ် အသိုင်းအဝိုင်းကလည်း ဤကဲ့သို့သော သွန်သင်ချက်များရှိနေသည့် သာသနာတစ်ခုကို မျက်စိမှိတ် ကျင့်သုံးနေကြသည်လော။ ဤလမ်းညွှန်အတိုင်းသာဆိုပါက မွတ်စလင်မ်တို့သည် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏ လမ်းညွှန်ချက်များကို အသက်ထက်ဆုံး လိုက်နာကျင့်သုံး ဆောက်တည်ရန် ကြိုးစားနေကြပါသည်ဆိုပါလျက်နှင့် ဤကမ္ဘာမြေဝယ် မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူ ကျန်ရှိနေသေးသည်မှာလည်း အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာပင်။
ထိုသို့ဆိုလျင် ရှင်းပါသည်။ ဤသွန်သင်ချက်များသည် ထိုဝါဒဖြန့်ချိသူ၊ ပြဿနာ မီးမွှေးနေသူ၊ အမုန်းမှိုင်းတိုက်နေသူတို့ဆိုသကဲ့သို့ မဟုတ်နေသောကြောင့်သာပါပင်။
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်လာ အထက်ပါသွန်သင်ချက်များအကြောင်းမရှင်းမီ အစ္စလာမ် စတင်ထွန်းကားလာချိန်က အခြေအနေနှင့် ထိုကျမ်းမြတ် ကျရောက်လာပုံကို ရှင်းပြလိုပါသည်။
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်ပါးမှ လူသားတို့ထံသို့ တမန်တော်မြတ် မုဟမ္မဒ် (ငြိမ်းချမ်းပါစေ)မှတဆင့် ၂၃နှစ်တာ ကာလအတွင်း လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်လျက် ဝါကျအလိုက်၊ စာပိုဒ်အလိုက် သွန်သင်ဆုံးမချက်အဖြစ် ကျရောက်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏ ဆုံးမသြဝါဒတော်များကို အပြည့်အဝ နားလည်နိုင်ရန်အတွက် အဆိုပါ သွန်သင်ချက်များကို မည်သို့သော အခြေအနေ အချိန်အခါတွင် မည်သည့်အတွက် ညွှန်ကြားခြင်းဖြစ်ကြောင်း နားလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ထို့ပြင် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏ သွန်သင်ချက်အား မိမိလိုရာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမျှသာ လိုရာစွဲ ဖြတ်တောက်ထုတ်နုတ်ခြင်းမပြုဘဲ ရှေ့နောက်အကြောင်းချင်းရာကိုပါ ထောက်ရှုကာ သွန်သင်ချက်သဘောကို အပြည့်အဝနားလည်ရန် ကြိုးစားရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။
အာရေဗျကျွန်းဆွယ် မက္ကာဟ်ရွှေမြို့တော်တွင် အစ္စလာမ်သာသနာ စတင်စဉ်ကာလတွင် မွတ်စလင်မ်များသည် မယုံကြည်သူ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများ၏ နည်းမျိုးစုံဖြင့် နှိပ်စက်ညှင်းပမ်း သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ အစ္စလာမ်ကို ယုံကြည်မိသည့်အတွက် စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးအရ ဝိုင်းကျဉ် ရှောင်ဖယ်သည့်ဒဏ်လည်း ခံခဲ့ကြရသည်။ ထူးခြားသည်က ထိုသို့သော မတရားနှိပ်စက်မှု အမျိုးမျိုးနှင့် ကြုံဆုံနေရစဉ်ကာလတွင်ပင် မွတ်စလင်မ်တို့က မိမိတို့နှင့် အယူမတူသူတို့အပေါ် တရားမျှတစွာ မေတ္တာထားနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အစ္စလာမ်၏ လမ်းပြပုဂ္ဂိုလ် မဟာတမန်တော်မြတ်၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိကို လေ့လာကြည့်လျင် မိမိတစ်ကိုယ်ရည်အား ရန်ပြုသူ၊ စော်ကားသူ၊ မတရားပြုမူသူ၊ စွပ်စွဲသူမှန်သမျှအား မေတ္တာထား ခွင့်လွှတ်ခဲ့သည်။ မိမိဝတ်ပြုဆုတောင်းနေစဉ် မိမိ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်သို့ အမှိုက်သရိုက် အညစ်ကြေးများ သွန်ချသူ အဘွားအိုကို အပြစ်မယူခဲ့သည်သာမက တစ်ရက် ထိုသို့လာရောက်ပြုမူခြင်း မရှိသောကြောင့် နေထိုင်မကောင်းခြင်းကြောင့်များလား စိတ်ပူကာ လူမမာ သွားမေးခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ထူးခြားလှသည့် နောက်အချက်က အစ္စလာမ်ကို နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးရန် ကြိုးပမ်းနေသူများသည်ပင်လျင် ထိုခေတ်ထိုအခါ၏ လုံခြုံရေးနည်းစနစ် တစ်ခုဖြစ်သည့် မိမိတို့ ဥစ္စာပစ္စည်း လုံခြုံရေးအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသူထံ မိမိတို့ ပစ္စည်းဥစ္စာများ အပ်နှံရာတွင်မူ ထို တမန်တော်မြတ်ထံ လာရောက် အပ်နှံခဲ့ကြသည်ကို ထောက်ရှုလျင် မွတ်စလင်မ်တို့၏ သစ္စာရှိမှုကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
မိမိ တစ်ကိုယ်ရည်အတွက် စော်ကားဒုက္ခပေးသမျှ ခါးစည်းသည်းခံခဲ့သော်လည်း မွတ်စလင်မ်အများ ၁၃နှစ်တာမျှ ဘေးဒုက္ခမျိုးစုံ ကြုံလာသည့်အခါတွင် အခြားမြို့ရွာသို့ (ယဆ်ရစ်ဘ်-နောင်တွင် မဒီနဟ်မြို့ဟု အမည်တွင်သည်) မွတ်စလင်မ်များအား ပြောင်းရွှေ့ အခြေချစေခဲ့ရသည်။ ထိုသို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီးသည့်တိုင်အောင်ပင် ကျန်ရစ်သည့် အိုးအိမ်များ၊ ဆွေမျိုးသားချင်း မိသားစုဝင်များအား ဆက်လက် ဖျက်ဆီးကာ လူမှုရေး စီးပွားရေးအရ နားလန်မထူနိုင်အောင် ဆက်လက် ဒုက္ခပေးနေသေးသည့်အတွက် မတတ်သာသည့်နောက်ဆုံးတွင် ခုခံစစ်အဖြစ် ပြန်လည် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရကြသည်။
မတရားသဖြင့် ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်းသည် သတ်ဖြတ်ခြင်းထက်ပင် ဆိုးရွားလှသည် မဟုတ်ပါလော။ (ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် ၂း ၁၉၁)
မွတ်စလင်မ်များသည် မိမိတစ်ဦးချင်းအတွက် မေတ္တာထား ငုံ့ခံခဲ့ကြသလို အများအကျိုးနှင့်ယှဉ်လာပါကမူ သစ္စာတရားအတွက် တုန့်ပြန်ခဲ့ကြရခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏ သွန်သင်ချက်များသည် ထိုစဉ်အချိန်က သစ္စာတရားအတွက် တုန့်ပြန်ရန်လိုအပ်လာစဉ်က လမ်းညွှန်အဖြစ် ကျရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဆက်လက်၍ အဆိုပါ သွန်သင်ချက်တို့အား လိုသလို ဖြတ်တောက်ခြင်းမပြုဘဲ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုလုံးအား မီးမောင်းထိုးပြနေသည့် ရှေ့နောက် ဝါကျစာကြောင်းများနှင့်ပါ ယှဉ်တွဲ လေ့လာကြည့်ကြပါဦးစို့။
“ထို့ပြင်တဝ အသင်တို့သည် အလ္ခာဟ်အရှင်မြတ်၏ လမ်းတော်၌ အသင်တို့ကို စတင် စစ်မက် ပြိုင်ဆိုင်တိုက်သူတို့နှင့် စစ်မက် ပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်လေလော့။ သို့ရာတွင် အသင်တို့သည် မကျူးလွန်ကျကုန်လင့်။ ဧကံမုချ အရှင်မြတ်သည် ကျူးလွန်သူတို့အား နှစ်သက်တော်မမူချေ။
ထို့ပြင်တဝ အသင်တို့သည် ထိုသူ( ကာဖိရ် – မိစ္ဆာ ဒိဋ္ဌိ) တို့အား တွေ့ဆုံ ဖမ်းဆီးမိရာအရပ်၌ တိုက်ခိုက် သုတ်သင် ရှင်းလင်းကြကုန်လော့။ ထိုသူတို့က အသင်တို့အား (အသင်တုိ့နေအိမ်များမှ၊ အသင်တို့ မြို့ရွာမှ) နှင်ထုတ်သကဲ့သို့ အသင်တို့ကလည်း သူတို့အား နှင်ထုတ်ကြလေကုန်။ အမှန်သော်ကား မတရားသဖြင့် ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်းသည် သတ်ဖြတ်ခြင်းထက်ပင် ဆိုးရွားလှသည် မဟုတ်ပါလော။ သို့ဖြစ်ငြားသော်လည်း မတ်စ်ဂျီဒိလ်ဟရာမ် – ရိုသေလေးစားအပ်သော ဝတ်ကျောင်းတော်အပါးတွင် ထိုသူတို့သည် သင်တို့အား မတိုက်ခိုက်သမျှကာလပတ်လုံး သင်တို့ကလည်း မတိုက်ခိုက်ကြနှင့်။ သူတို့က စတင်တိုက်ခိုက်လာလျင်မူ သင်တို့ကလည်း ပြန်လည် တိုက်ခိုက်ကြကုန်။ ဤသည်ပင် ကာဖစ်ရ်- မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့အား အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
အသင်တို့သည် သာသနာရေး၌ နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းမှု လုံးဝ ပပျောက်ကာ သာသနာသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အတွက် ဖြစ်လာသည့်တိုင်အောင် ထိုသူတို့နှင့် စစ်မက်ပြိုင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်ကြကုန်လော့။ သို့ရာတွင် ထိုသူတို့သည် စစ်မက်ပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ရပ်တံ့ပါမူ ကျူးလွန်နှိပ်စက်ညှင်းပန်းသူတို့မှတစ်ပါး အခြားသူတို့အပေါ်ဝယ် မည်သို့မျှ ကျူး ကျော်စော်ကားသတ်ဖြတ်ရန် အကြောင်းမရှိပေ။ ”
(ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် ၂း၁၉၀ – ၁၉၂)
ထိုနည်းတူစွာပင် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် အခန်းကဏ္ဍ၉တွင် ပါရှိသော “သို့ဖြစ်ပေရာ အသင်တို့သည် ထိုမွတ်ရ်ှရစ်က် (တုဖက်ယှဉ်တွဲကိုးကွယ်သူ) တို့အား တွေ့ရာနေရာများတွင် တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ် ကြလေကုန်။” ဆိုသည်ကလည်း ကိုကဏ္ဍ အစမှစကာ ဝါကျစာကြောင်းရေအမှတ် ၂၀ ဝန်းကျင်အထိ ဖတ်ရှုလေ့လာပါက ပဋိဥာဉ် သဘောတူညီချက် ချုပ်ဆိုထားပြီးနောက်တွင်မှ ထိုပဋိဥာဉ်ကိုဖောက်ဖျက်သူ၊ သစ္စာဖောက်သူတို့ကိုသာ ရည်ညွှန်းကြောင်း အခိုင်အမာ တွေ့ရပါမည်။ ထိုသူတို့ကိုပင် သူတို့ဘက်မှ ပြောင်းလဲလိုက ပြောင်းလဲလာနိုင်ရန် လေးလတာကာလမျှ စောင့်ကြည့်ရန် ညွှန်ကြားထားပါသေးသည်။ အကယ်၍ ထို့နောက်တွင်မှ သူတို့ပြောင်းလဲကာ ခိုလှူံလာပါကလည်း ထိုသူတို့အား ဘေးရန်ကင်းရာသို့ ပို့ဆောင်ကာကွယ်ကြရန် သွန်သင်ထားပါသည်။ အသေးစိတ်ကို စာရှုသူတို့ ကိုယ်တိုင်ဖတ်ရှုနိုင်ရန် အညွှန်းပေးပါမည်။
အာရဗီဝေါဟာရတွင် (ကသလ) ဟူသောပုဒ်သည် သတ်ဖြတ်ခြင်းဟူသော အဓိပ္ပါယ်သာမက စစ်မက်ပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခြင်းဟူသော အဓိပ္ပါယ်ပါရသည်ဖြစ်ရာ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ပါ အထက်ပါ ညွှန်ကြားချက်များသည် ဒုတိယအဓိပ္ပါယ် စစ်မက်တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ ဤမျှဆိုလျင် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်က တိုက်ခိုက်ခုခံပိုင်ခွင့်ပေးထားသူ ဘာသာခြားတို့သည် မည်သူတို့ကို ဆိုလိုကြောင်း ရှင်းလောက်ပြီဟု ယုံကြည်ပါသည်။ အစ္စလာမ်က သစ္စတရား၊ တရားမျှတမှုတို့အတွက် ချွင်းချက်လိုအပ်၍မဟုတ်ဘဲ လူသားတစ်ဦးအား သတ်ဖြတ်ခြင်းသည် လူသားထုတစ်ရပ်လုံးအား သတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ညီကြောင်း၊ ထိုနည်းတူပင် လူတစ်ဦးအသက်အားကယ်တင်ခြင်းသည် လူခပင်းအား ကယ်ဆယ်ခြင်းနှင့် တူညီကြောင်း သွန်သင်ထားပါသည်။
လူသားတစ်ဦးမဆိုထားဘိ၊ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကိုပင် ညှင်းပန်းခြင်းမပြုရန်၊ သစ်ရွက်တစ်ရွက်ကိုပင် အကြောင်းမဲ့ ဖျက်လိုဖျက်ဆီး မလုပ်ရန်၊ သက်မဲ့ ရေတွင်းရေကန်ကိုပင် မိမိကြောင့် မတိမ်ကောစေရန် တမန်တော်မြတ်ကလည်း တားမြစ်ညွှန်ကြားထားပါသည်။
မလွှဲသာမရှောင်သာရင်ဆိုင်ရသောဤသို့သော ခုခံစစ်ပွဲအခြေအနေမျိုးတွင်ပင် ယခင်က မရှိခဲ့ဖူးသည့် တရားမျှတသည့် စစ်စည်းမျဉ်းများ ချမှတ်ခဲ့သည်မှာ သမိုင်းတွင် အထင်အရှားဖြစ်ပါသည်။ စစ်နှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသောသူများဖြစ်သည့် ကလေးသူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများအား မထိပါးရန်၊ စစ်မြေပြင်ဝန်းကျင်ရှိ ရေတွင်းရေကန်နှင့် သစ်ပင်များအား မဖျက်ဆီးရန်၊ စစ်သုံ့ပန်းများအား နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ခြင်း မပြုရန်၊ စစ်သုံ့ပန်းများအနေဖြင့် လျော်ကြေးပေးခြင်းဖြင့် ဖြစ်စေ စာမတတ်သူမွတ်စလင်မ်၁၀ဦးအား စာသင်ကြားပေးခြင့်ဖြစ်စေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြုရန် စသည့် လူ့အခွင့်အရေးကို အခြေခံသော တရားမျှတမှုကို ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် ပထမဆုံးစတင်ခဲ့သူမှာ သစ္စာဝါဒီ မွတ်စလင်မ်များ ဖြစ်ကြသည်။
ခုခံစစ်ပွဲတစ်ခုအတွင်းကြုံခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ရပ်ကို ပြန်လည် တင်ပြပါမည်။ မွတ်စလင်မ် စစ်သည်တစ်ဦင်္းက ရန်သူ စစ်ခေါင်းဆောင်အား အနိုင်ရကာ ဓားဖြင့်ခုတ်ပိုင်းရန် ရွယ်လိုက်စဉ်တွင် ထိုရန်သူက မွတ်စလင်မ်စစ်သည်အား တံတွေးနှင့် ထွေးလိုက်ပါသည်။ ထိုအခါ မွတ်စလင်မ်စစ်သည်က ဒေါသတစ်ကြီးဖြစ်သွားသော်လည်း ထိုရန်သူအား ဆက်လက်တိုက်ခိုက် ခုတ်ပိုင်းခြင်းမပြုတော့ဘဲ လွှတ်ပေးလိုက်ရာ မိမိကိုကိုယ် သေသူအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသားရန်သူခေါင်းဆောင်က မယုံကြည်နိုင်စွာဖြင့် အကြောင်းရင်းကို မေးကြည့်ပါသည်။ မွတ်စလင်မ်စစ်သည်အနေဖြင့် မိမိသည် မိမိအတ္တအတွက်မဟုတ်ဘဲ သစ္စာတရားအတွက်သာ တိုက်ပွဲဝင်နေခဲ့သည်ဖြစ်ပြီး မိမိမျက်နှာ တံတွေးအထွေးခံရသဖြင့် စိတ်ဆိုးနေချိန်တွင် ဆက်လက်ခုတ်ပိုင်းပါက မိမိအတ္တအတွက် လူသတ်ရာရောက်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ဤသည်ကို မလိုလား၍ ဆက်မတိုက်၊ မသတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ဤဖြစ်စဉ်က အဆိုပါရန်သူ၏ စိတ်နှလုံးကို ပြောင်းလဲစေလျက် သူကိုယ်တိုင် မွတ်စလင်မ်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ဤသည်မှာ စစ်မြေပြင်တွင်တောင်မှ အမှန်တရားအတွက် သက်သက်သာ တိုက်ပွဲဝင်သူ သစ္စာဝါဒီ မွတ်စလင်မ်တို့၏ ဥပမာ တစ်ခုပင်။
နောက်ဆုံး ရန်သူတို့ အရေးနိမ့်သွားချိန် စစ်ပွဲများအားလုံး အဆုံးသတ်သွားရသည့် မက္ကာဟ်ရွှေမြို့တော် အောင်နိုင်သည့်ကာလတွင်မူ မွတ်စလင်မ်များအနေဖြင့် ရန်သူအားလုံးတို့အား သွေးမြေမကျစေရဘဲ အကြွင်းမဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးသည်။ တမန်တော်မြတ်သည် မိမိအားကိုးချစ်ခင်ရသော ဦးရီးတော်ကို သတ်သူကိုပင် အပြစ်မယူဘဲ ခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍သာ ဘာသာခြားမှန်သမျှအား အကြောင်းမဲ့ သတ်ဖြတ်ရန် ညွှန်ကြားထားရိုးမှန်ပါက ထိုသူတို့အသက်ဆက်ရှင်ခဲ့ရာ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ ရှိရန် အကြောင်းမရှိပါ။
အစ္စလာမ်၏ စစ်မှန်သော သွန်သင်ချက်များတွင် မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူ ဘာသာခြားများနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ ဆိုထားကြောင်း ဆက်လက် တင်ပြပါမည်။
အစ္စလာမ့်သွန်သင်ချက်အရ လူသားအားလုံးသည် တစ်မိတစ်ဖတည်းမှ ဆင်းသက်လာပြီး အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်ပါးတွင် အမြင့်မြတ်ဆုံးလူသားမှာ မျိုးနွယ်၊ အသားအရာင်၊ ဇာတိတို့ကို အခြေမခံဘဲ သက္ကဝါခေါ် ကိုယ်ကျင့်စာရိတ္တ အမြတ်ဆုံးလူသာဖြစ်ပါသည်။
ဘာသာတရားများ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ယုံကြည်ချက်၊ ကျင့်သုံးဆောက်တည်မှုများ မတူညီ ကွဲပြားကြပါသည်။ မတူညီမှုကို တန်းညှိနေရန် မလိုပါ။ မိမိတို့လုပ်ရပ်အတိုင်း ကိုယ့်ပြုသည့်ကံ ကိုယ်နှင့်ဆိုင်ပါမည်။ အစ္စလာမ့်သွန်သင်ချက်အရ ကိုယ့်သာသနာနှင့်ကိုယ်ပါ။ ကိုယ့်လမ်းကိုယ် လျှောက်ကြရမည်သာ။
“ အသင် ပြောကြားပါလေ။
အို (အစ္စလာမ်ကို) မယုံကြည်သူအပေါင်းတို့…
ကျွန်ုပ်သည် သင်တို့ကိုးကွယ်လျက်ရှိကြသော ကိုးကွယ်ရာများကို ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်သည်မဟုတ်ပေ။
ထို့ပြင် သင်တို့်သည်လည်း ကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်လျက်ရှိကြသော ကိုးကွယ်ရာကို ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်ကြသူများ မဟုတ်ပေ။
ထို့ပြင် ကျွန်ုပ်သည် သင်တို့ကိုးကွယ်ကြကုန်သော ကိုးကွယ်ရာများကို ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်မည့်သူ မဟုတ်ပေ။
ထိုနည်းတုစွာ သင်တို့်သည်လည်း ကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်လျက်ရှိကြသော ကိုးကွယ်ရာကို ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်ကြမည့်သူများ မဟုတ်ပေ။
စင်စစ်သော်ကား သင်တို့အဖို့ သင်တို့၏ အကျိုး၊ လမ်းစဉ်၊ သာသနာဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်အဖို့ ကျွန်ုပ်၏ အကျိုး၊ လမ်းစဉ်၊ သာသနာပင် ဖြစ်ပေသည်။”
ထိုသို့ ကိုယ့်ခရီးကိုယ်သွားနေကြသူ အချင်းချင်း မည်သို့မည်ပုံ ဆက်ဆံရမည်ကိုလည်း ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ သွန်သင်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
“အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် အသင်တို့အား အကြင်သို့သောသူတို့ကို ကျေးဇူးပြုခြင်းမှလည်းကောင်း၊ တရားမျှတစွာ ဆက်ဆံခြင်းမှလည်းကောင်း တားမြစ်တော်မူသည်မဟုတ်ပေ။ ထိုသူတို့သည် အသင်တို့အား သာသနာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်လည်းမဟုတ်ပေ၊ အသင်တို့အား အသင်တို့၏ နေအိမ်များမှ နှင်ထုတ်ခဲ့ကြသည်လည်းမဟုတ်ပေ။ ဧကန်စင်စစ် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် တရားမျှတသူတို့အား နှစ်သက်ချစ်ခင်တော်မူ၏။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် အသင်တို့အား အကြင်သို့သောသူတို့ကို အဆွေခင်ပွန်း ပြုလုပ်ခြင်းမှသာ တားမြစ်တော်မူ၏။ ထိုသူတို့သည် အသင်တို့အား သာသနာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည့်အပြင် အသင်တို့အား အသင်တို့၏ နေအိမ်များမှ နှင်ထုတ်ခဲ့ကြ၏။ အသင်တို့ကို နှင်ထုတ်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ (သူတစ်ပါးတို့အား) ရိုင်းပင်းကူညီခဲ့ကြ၏။ စင်စစ်သော်ကား မည်သူမဆို ၄င်းတို့အား အဆွေခင်ပွန်း ပြုလုပ်သည်ရှိသော် ထိုကဲ့သို့သော သူတို့သည်သာလျင် မတရားသောသူများ ဖြစ်ကြကုန်သတည်း။”
အစ္စလာမ့် အနှစ်ချုပ်တရားသည် တရားမျှတရန်၊ ကောင်းမွန်စွာ ပြုမူဆက်ဆံရန်၊ ပေးကမ်းလှူဒါန်းရန်၊ မကောင်းမှုမတရားမှုတို့မှ ရှောင်ကျဉ်ရန်ဖြစ်သည်။
အစ္စလာမ်သာသနာတွင် အဓမ္မစနစ်ကို လုံးဝ ခွင့်မပြုပါ။
“ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သော တရားလမ်းစဉ်သည် မမှန်ကန်သောလမ်းစဉ်နှင့် ရှင်းလင်းထင်ရှားစွာ ကွဲပြားခြားနားလျက် ရှိနေပြီဖြစ်ရာ သာသနာရေးတွင် အနိုင့်အထက် အလျဉ်းမပြုရ”
ဘာသာ မတူသူများနှင့် လူသားချင်းအတူ လက်တွဲကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်တို့ တစ်ပုံတစ်ပင် ရှိပါသည်။ လက်တွေ့လည်း လက်တွဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ တမန်တော်မြတ်သည် မဒီနဟ် မြို့တွင် ဂျူးများနှင့်အတူ မြို့တော် တိုးတက်အေးချမ်းရေးအတွက် ဦးစီးဦးဆောင်ပြုခဲ့သည်။ ဘာသာမတူသူတို့အား အကြောင်းမဲ့ သတ်ဖြတ်ရန် မဆိုထားဘိ၊ ဘာသာခြား နာရေးချရန် သယ်သွားသည်ကိုပင် ကမန်တော်မြတ်က မတ်တပ်ရပ်၍ ဆုတောင်းမှုပြုသဖြင့် နောက်လိုက်သာဝကများက ဘာသာခြား ဂျူးတစ်ဦး၏ နာရေးဖြစ်ကြောင်း ပြောလာသည်ကို ဂျူးဘာသာဝင်ကရော လူမဟုတ်ဘူးလားဟု ပြန်မေးကာ လူသားဝါဒကို လက်တွေ့ ကျင့်ဆောင်ပြသွားခဲ့သည်။
အစ္စလာမ်အယူဝါဒအရ ကမ္ဘာ့အိမ်ထောင်စုကြီးတစ်ခုလုံးသည် မိသားစုကြီးဖြစ်ရာ မွတ်စ်လင်မ်တစ်ဦးအဖို့ ကမ္ဘာ့အိမ်ထောင်စုအတွင်း၌ သူစိမ်းဟူ၍ တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှပင်မရှိပေ။ အားလုံးတို့သည် မိသားစုများဖြစ်ကြပေရာ အချင်းချင်း အကျိုးပြုရမည်သာဖြစ်၍ ဒုက္ခမပေးရာ။ တမန်တော်မြတ်၏ သြဝါဒတော်အချို့အား ဆက်လက်တင်ပြပါမည်။
“မွတ်စ်လင်မ်တို့သည် မိမိ၏နှုတ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လက်ဖြင့်လည်းကောင်း မည်သူ့ကိုမျှ ဒုက္ခမပေးရ။”
“ကြီးသူကို မလေးစား၊ ငယ်သူကို မသနားသူသည် ငါ၏နောက်လိုက်မဟုတ်။”
“မိမိအဖို့ နှစ်ခြိုက်သောအရာကို သူတစ်ပါးအဖို့ မနှစ်ခြိုက်သောသူသည် မွတ်စ်လင်မ်မဟုတ်”
“အိမ်နီးချင်းကို ဒုက္ခပေးသူသည် မွတ်စ်လင်မ်မဟုတ်”
“အသင်တို့သည် ကမ္ဘာမြေ၌ ရှိသူတို့အား သနားကြင်နာကြကုန်။ ကောင်းကင်ထက်ရှိတော်မူသော အရှင်သည် အသင်တို့အား သနားတော်မူအံ့။”
“အဖန်ဆင်းခံ ဝေနေယျသတ္တဝါအားလုံးတို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အိမ်တော်သူ အိမ်တော်သားများ ဖြစ်ကြပေသည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်၌ အိမ်တော်သူအိမ်တော်သားများအနက် အများဆုံး ချစ်ကြည် မြတ်နိုးအပ်သူမှာ အိမ်တော်သူအိမ်တော်သားများအား အများဆုံး အကျိုးပြုသူသာဖြစ်ပေသည်”
အထက်တွင် ရှင်းလင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးသော ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ပါ သွန်သင်ချက်များနှင့် တမန်တော်မြတ်၏ သြဝါဒတော်များအရ အစ္စလာမ်က ဘာသာခြားတို့အား မည်သို့မည်ပုံ သဘောထားကာ ဆက်ဆံခိုင်းထားသည်ဆိုသည်ကို စာရှုသူကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်သည် နှလုံးသား သော့မခတ်ထားကြသူ လူခပင်းအတွက် အကောင်းဆုံး ဆုံးမသြဝါဒကျမ်းတော် ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့ အစွဲများကိုချွတ်ကာ လေ့လာမှသာ အမှန်တရားကို တွေ့နိုင်ပါမည်။ အဂတိတရားကင်းစွာဖြင့် အမှန်တရားကို ရှာဖွေစေလိုပါသည်။ ယခုအခါ ဘာသာစကား အသီးသီးဖြင့် ကျမ်းတော်မြတကုရ်အာန်အား ဘာသာပြန်ပြီး ဖြစ်ရာ အင်တာနက်ပေါ်တွင် စာရှုသူ တတ်ကျွမ်းရာ ဘာသာစကားဖြင့် အလွယ်တကူ ဖတ်ရှုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ လိုအပ်ပါကလည်း မိမိတို့နှင့် နီးစပ်ရာ မွတ်စလင်မ်တို့ထံမှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေ၊ ဤ website မှဖြစ်စေ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
တစ်ဆင့်စကား တစ်ဆင့်ကြားသမျှ ထင်ရောင်ထင်မှားဖြင့် သံသယပွားစရာခေတ် မဟုတ်တော့ပါ။
ဤဆောင်းပါးအဆုံး ဤနေရာ တွင် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် မြန်မာဘာသာပြန် download link အား ပူးတွဲ ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။ အစွဲကင်းကင်းဖြင့် မိမိ အသိဥာဏ်နှင့် နှလုံးသားကို ဖွင့်ထားကာ ဖတ်ရှုစေလိုပါသည်။
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကတော့ ကျွန်တော်တို့အား သတင်းစကားတစ်ခုကို စာရိတ္တဖောက်ပြန်သူ မသူတော်တစ်ဦးဦးက သယ်ဆောင်လာလျင် မသိဘဲနှင့် လူ့အစုအဝေးတစ်ရပ်ကို အန္တရာယ်မပြုမိစေရန် သင်တို့ဆန်းစစ်ကြဖို့၊ သို့မဟုတ်လျင် သင်တို့ ပြုမူမိခဲ့သည်အတွက် ကြေကွဲ နောင်တရရမည် ဟူ၍ ဆုံမသွန်သင်ထားသည်။
သူများ မှိုင်းတိုက်သမျှ မယုံကြည်ရန် စာရှုသူ၏ ဦးနှောက်ကို၊ စာရှုသူ သင်ထားခဲ့သမျှ ပညာကို၊ စာရှုသူ၏ အသိတရားကို အစွမ်းကုန် အသုံးချရန်မှာ စာရှုသူ မိတ်ဆွေ၏ တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။
အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံ တိုးတက်အေးချမ်းစေရေး တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ပါဝင်ရန်မှာ ကျွန်တော်တို့အားလုံး၏ တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းပြည်တွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြကုန်သော လူမျိုးဘာသာမရွေး ချစ်ကြည်ရေး၊ အပြနအလှန်ယုံကြည်မှု ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက် အားလုံး အုတ်တစ်ချပ် ၊သဲတစ်ပွင့် နိုင်ရာတာဝန် ထမ်းကြရပါဦးမည်။
မဟုတ်မမှတ်လုပ်ကြံ ဝါဒမှိုင်းတိုက် အမုန်းမီးမွှေးနေသူများ ကျဆုံးပါစေသား။ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှ အပယ်ခံ အမြန်ဆုံးဖြစ်ပါစေသား။ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခ ဖြစ်စေရန် ခလောက်ဆန်ရန် အကောက်ကြံနေကြသူများ၏ အကြံအစည်မှန်သမျှ ပျက်စီးပါစေသား။
ဝါဒမှိုင်းမိနေသူများ အမြင်မှန် အမြန်ဆုံးရပါစေသား။
(ကိုးကား – (၁) အစ္စလာမ်အယူဝါဒ၊ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ၁၅၊ ရေးသူ သီရိပျံချီ အလ္လမဟ် ဃာဇီ မုဟမ္နဒ် ဟာရှင်မ်၊
(၂) Dr. Zakir Naik ဟောပြောချက်များ)
ကုရ်အာန်ကျမ်းတော် မြန်မာဘာသာပြန် ဖတ်လိုလျှင် http://www.quraninburmese.com/Books/Holy%20Quran.pdf
Tags: Buddhism, Burma, Malaysia, Mandalay, Meiktila, Muslim, Myanmar
This entry was posted on April 17, 2013 at 10:13 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “မမေးလည်းဖြေ (၁၆)- မွတ်စလင်မ်မဟုတ်ရင် သတ်ရမှာလား?”
April 18, 2013 at 2:17 am | Reply
please see this terrible buddhist monk with FB account “ashin kodanna”,saya!